Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe, Enokubukwa Kwasolwandle - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe, Enokubukwa Kwasolwandle
Cape Foulwind, West Coast, i-New Zealand
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe iyindlu ephakeme kakhulu enokubukwa kolwandle okumangazayo okubheke uLwandle i-Tasman. Bukela amagagasi edilika eduze namatshe ayinkimbinkimbi. Izingadi zangasese, ezinokuthula, imvelo ziningi! Bukela ama-sunsets omlingo kusuka ekubukekeni eweni. Amabhishi, i-Seal Colony/i-Lighthouse Walkway, umzila wase-Kawatiri Coastal emnyango. Ikhishi eliphelele nezindawo zegumbi lokugezela. I-Wi-Fi yamahhala. Ngaphandle kokupaka emgwaqweni. Ukudla kwasekuseni okulula kuyatholakala, kuhlanganise namaqanda amasha. Jabulela umoya omuhle wolwandle!
Indawo ekahle kakhulu yokuzijabulisa nemvelo, noma nje uphumule futhi uthathe uhambo lokubuka indawo enhle kakhulu.
Kunezindawo zokuhlala eziningana eceleni kwe-Lighthouse Road, ne-Lighthouse Walkway eyaziwa kakhulu ekugcineni komgwaqo. I-Steeples Cottage iyindlu ehamba phambili, ebheke i-Gibsons Beach, ukwakheka kwamatshe e-Steeples kanye noLwandle lwe-Tasman.
I- "local" Star Tavern ingu-400M eceleni komgwaqo, enokudla okumnandi okuhlukahlukene, kuhlanganise nokuphuma. I-Lighthouse Road igijima e-Headland e-Cape Foulwind, ne-Steeples Cottage indawo yokuhlala enokuthula, ethulile, ephumuzayo emphakathini oyingqayizivele.
Uzobona uWayne noWendy bezungeze indlu, futhi nakuba bezokunikeza indawo, bayatholakala ukusiza ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke.